(DHEGEYSO)-Puntland oo qaadacday natiijada shirkii Muqdisho iyo go’aanka dowladda federalka ah ee Soomaaliya. – Radio Daljir
(DHEGEYSO)-Puntland oo qaadacday natiijada shirkii Muqdisho iyo go’aanka dowladda federalka ah ee Soomaaliya.
Janaayo 27, 2016 12:43 g 0
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa caawa 27-Jan-2016 shir jaraa’id ku qabtay xarunta Madaxtooyada Soomaaliya kadib markii uu galabta Xarunta Villa Soomaaliya kaga qayb galay shir gaar ah oo ay kasoo qayb galeen Ra’iisul-wasaaraha Dawladda Federaalka, Madaxda Maamulada iyo wakiillo meteleyey Besha Caalamka.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa intaasi kadib shirkii jaraa’id ee uu ku qabtay madaxtooyada kaga hadlay go’aankii ay dawladda federaalku gaadhey kaas ahaa in aqalka hoose ee baarlamaanka lagu soo xulidoono habka awood qaybsiga qabiilka ee 4.5, halka aqalka sarena lagu soo xuli doono hab maamul goboleed iyadoo Puntland iyo Somaliland loogu dari doono min saddex xubnood oo dheeraad ah, go’aankaas oo beesha caalamkuna ay soo dhoweysey.
“waxaan rabaa halkaan inaan ka caddeeyo anigoo ku hadlaya magaca dawladda Puntland in aanan aqbalayn go’aankaas, ka-madaxweyne ahaana aanu ahayn go’aankaasi mid ay ii soo wakiisheen shacabka Puntland, aniguna rabitaankooda ayaan ku shaqaynayaa” ayuu yiri madaxweyne Dr.Cabdiweli Gaas.
Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa sidoo kale xusay shacabka soomaaliyeed in ay yihiin dad isku dan ah islamarkaana isku baahi ah oo doonay inay gaadhaan horumar iyo caddaalad balse waxa mustaqbalkooda hortaagni uu yahay nidaamka qabiilka ee 4.5 kaas oo aafeeyey horumarkii iyo helitaanka dawladnimadii soomaaliyeed.
“Anigu ka madaxweyne ahaan shacaka Puntland ayaan kucelinayaa talada iyaga ayaana go’aanka masiirkooda iska leh” ayuu yiri Madaxweyne Dr.Cabdiwli Maxamed Cali.
Madaxweynaha Puntland oo Muqdisho kula kulmay wakiilka cusub ee xoghayah ee Q.M U qaabilsan Soomaaliya.